onitra, tombony, Ary Career Evaluation matihanina miasa Adidy Sample – JobDescriptionSample
Home / Famariparitana ny asa / onitra, tombony, Ary Career Evaluation matihanina miasa Adidy Sample
onitra, tombony, Ary Career Evaluation matihanina miasa Adidy Sample
superadmin Jona 18, 2016 Famariparitana ny asa Leave a comment 184 Views
Tany sy ny manam-pahaizana Place Job Adidy Sample
Online Merchants Work Duty Template
rivotra Boat, ary Room Siansa
Mampianatra kilasy, afa-tsy mpikaroka sy ny siansa, ao anatin'ny tena siansa. Mahakasika ireo izay manao fifangaroan'ny ny fampianarana sy ny fanadihadiana, ary samy manam-pahaizana miasa amin'ny ankapobeny mampianatra.
Fitondran-tena ny fianarana ao anatin'ny fitsipi-pifehezana-tsaina manokana sy ny lahatsoratra ao amin'ny manam-pahaizana manokana amin'izy io fanatsoahan-kevitra, mpitarika, na ny haino aman-jery nomerika.
Ambarao tolotra soso-kevitra mba hividy vola fianarana fanampiny.
Tandremo abreast ny fandrosoana raha mbola ao ilay foto-kevitra amin'ny alalan'ny niteny tamin'ny olom-pantany, mandinika ankehitriny tantara foronina, ary mandray anjara amin'ny fivoriana matihanina.
Monitor internship, nahazo diplaoma na undergraduate fiofanana, sy ny fianarana asa.
Mamokatra sy manao lahateny eo amin'ny foto-kevitra toy ny ohatra thermodynamics sy ny Géologie ny diplaoma na undergrad mpianatra.
Fanaraha-maso ny asa sy ny laboratoara-zavatra akory.
Diniho sy ny fotoam-pianarana studentsA asa mazava ho azy, asa, sy ny antontan-taratasy.
Mazava ho azy fa ny vokatra ho fikarohana, toy ny ohatra syllabi asa, ary giveaways.
Miara-miasa mba hiatrehana olana Coaching sy ny fianarana.
manangona, manome, sy ny kilasy taxes, na manendry io asa io.
fomba Fiasa, Mazava ho azy fa afa-po hanova, fandaharam-pianarana, sy ny kilasy ary ny karazana fitaovana Subscribe to, ary hanaiky.
Start, Vonjeo, sy ny kilasy antonony resaka.
Manohana tsy tapaka-voalahatra birao hrs mpitari-dalana, ary ny fahazoan-dalana hidirana ny olona tsirairay.
Manoro hevitra ireo mpianatra ao amin'ny fandaharam-pianarana sy ny asa fanabeazana sy fiantsoana Miteraka.
Miaro mpianatra asa firaketana an-tsoratra, ambaratonga, miaraka amin'ireo rakitsoratra hafa izay ilaina.
Toerana handray anjara amin'ny asa, famandrihana, ary ny mpianatra fiantsoana ho miaramila.
Fitondran-tena toy ny naha izany fisarahana mandeha Admin andraikitra.
Haka ary hahazo vatsy sy ny fitaovana toy ny ohatra boky sy ny fitaovana laboratoara.
Omeo ny komity mpitantana na ny fianarana izay mikarakara ny olana am-pianarana, antsinjarany olana, ary ny andrim-drafitra.
Hahazo foana fitaovana mba hanampiana tetikasa fikarohana.
Fanombanana ny antontan-taratasy, na manampy amin'ny sehatra fifanakalozan-dresaka ho an'ny boky sy gazety lahatsoratra izay pitsaboana, ary mandrefy anie drafitra momba ny sampan-draharaha-pirenena.
Angony bibliôgrafia ny fanampiana manokana momba ny asa mamaky ivelany.
Omeo Consulting orinasa matihanina amin'ny tsena na govt.
Act ny fikambanana toy ny manam-pahaizana.
Handray anjara amin'ny asa atao manodidina sy ny antony.
Response olana avy amin'ny fiaraha-monina sy ny varotra.
Job Activities fepetra takiana mialohan'ny ahafahana
Fahazoanao ny hevitr'izay vakinao-fahazoana ny fehintsoratra sy ny andinin-tsoratra voasoratra eo amin'ny asa mifandray Docs.
Fahaiza-mihaino-Inona hafa-olona hoe manome tanteraka tsara, manana fotoana ho anareo mba hahatakatra ny antony namoronana, nanontany fanontaniana toy ny marina, ary tsy azo ekena fa tsy fanotofana amin'ny toe-javatra.
Publishing-taratasy On tsy mba toy ny tsy mety ny fepetra takiana ny mpijery miresaka tsara,.
Niady hevitra Miteny amin'ny hafa mba hizara angona effortlessly.
Rafitrisa-Mampiasa maths mba hamahana olana.
Science-fampiasana teknolojia fitsipika sy fomba mba hanarenana olana.
Mampiasa mitsikera-dia niady hevitra sy ny antony ny mamantatra ny fahaiza-manao sy ny kileman-toetra ny vokatra, mpisolo toerana fanafody na fomba olana.
Active ny Fianarana-fahalalana vaovao ny vokatry vaovao ho an'ny fahafahana sy ny olana ankehitriny-hamaha fanapahan-kevitra sy ny.
Fianarana Fomba-Fampiasana sy fifantenana coachingPERtutorial teknika sy fomba fiasa mety tsara ho an'ny toe-javatra manokana, na rehefa mahafehy fanabeazana hevitra vaovao.
Nanamarina-OverseeingORAssessing fahombiazana ny orinasa, samy hafa ny olona, na ny tenanao, na mandinika remedial asa mamokatra fandrosoana.
Social fidirana-raha tsy mahalala ny hafa’ valin-kafatra sy ny tena azony ny antony mitondra tena raha manao.
Fandrindrana-Manitsy hetsika raha oharina amin'ny olon-kafa’ fiaraha-mientana.
Fandresen-dahatra-mangataka ny hafa mba hanova ny sainy na ny asa.
Settlement-Manome ny hafa miaraka sy mitady ny hampihavana fiovana.
Fampianarana-Mampianatra ny hafa hanao zavatra HOWTO.
Company Orientation-mavitrika mitady paikady mba hanampiana ry namana.
Famahana olana Complex-manavaka mandroso olana sy ny fikarohana vaovao ilaina mba hamokarana sy hijery voafantina sy hampihatra vahaolana.
Raha mandinika raharaham-barotra Evaluation-filàna vahaolana ary maniry ny hanangana famolavolana.
Injeniera Design-Teknolojia hanampy mpanjifa sy ny fitaovana na trano hampifanarahana te.
Fitaovana Selection-famaritana ny karazana fitaovana sy ny fitaovana ilaina mba hamono ny asa.
Fametrahana-fametrahana tariby, milina, fitaovana, na ny fonosana hihaona fepetra.
Programming-Mamorona ordinatera fandaharana ho an'ny tanjona izay maro.
Operation Tracking-Topy Maso Eran antso, fanombanana, na samy hafa hita mba ho azo antoka ny fitaovana misy manao amin'izao fotoana izao araka ny tokony ho.
Operation ary Hazavao-Mpitantana fomba ny fitaovana na fitaovana.
Maintenance-ny manatanteraka mahazatra sy ny fikojakojana ny fitaovana, rehefa manapa-kevitra ary inona no karazana miasa eo no ilaina.
Fanamboarana-fanapahan-kevitra mahatonga ny fampandehanana Fahadisoana sy manapa-kevitra izay tokony hatao momba izany.
Manamboatra-fanamboarana fitaovana na teknika mampiasa ny fitaovana izay tena ilaina.
Quality Control Rehefa nandinika-manao fanombanana sy ny fanadihadiana ny vokatra, mpamatsy, na ny fomba fiasa mba hijerena kalitao na ny fahombiazany.
Fitsarana sy ny fanapahan-kevitra-jerena ny tombontsoa sy ny saram ankapobeny ny asa izay mety mahita ny tena tsara iray.
Analysis-ny fomba fanapahan-kevitra dia tsy maintsy manatanteraka ny rafitra sy ny fomba fanitsiana fotsiny amin'ny toe-javatra, fomba, ary ny toe-javatra mety hisy fiantraikany valiny.
Systems Evaluation-Famantarana ny fomba na ny tondro ny fampisehoana sy zava-dehibe ny asa ilaina mba hampitombo na marina miasa, mikasika ny nofinofy ny fitaovana.
Time Management-Fehezo ny ny fotoana ary koa ny hafa’ fe-potoana iray.
Asa ara-bola Resources-Famantarana ny fomba vola miditra dia mety ho ampiasaina mba hahazoana ny asa vita, ary ny ampamoaka momba ireo fandaniana.
Fomba fitantanana Material-Mandray sy mitandrina tsara manoloana ny fampiasana ny fitaovana amin'ny asa, sy ny vokatra singa ilaina ho zava-dehibe ny manao asa sasany.
Fitantanana ny Staff Resources-mampahery, famoronana, sady mitondra olona satria miasa, famantarana ny olona tsara indrindra ho an'ny asa.
Training Fepetra Experience Mila
Over 10 taona
Job Control Skills fahaizana
Zava-bita / Fiezahana – 91.03%
fiaretana – 91.92%
Fiezahana – 90.65%
Control – 88.84%
Matter ny hafa – 81.44%
toerany ara-tsosialy – 74.31%
Fahafehezan-tena – 78.07%
Stress tokonam-baravarana – 86.63%
azo itokisana – 85.19%
Mifantoha Detail – 89.63%
Tsy Nivadika – 88.73%
fahaleovan-tena – 94.78%
famoronana – 94.09%
poto-fisainana – 94.80%
Automotive injeniera Work Description Template
Hahazo vaovao, na ho an'ny fiara fomba nohatsaraina an'ireo trano mpanjifa, Motors, fampitana, na ny fomba fiara fanampiny, …